नेपाल एडुफेयर : छात्रावृत्तिका लागि १९ हजार बढी आवेदन
नेपाल एडुफेयर डटकमको ‘चौथो भर्चुअल शैक्षिक मेला’मा छात्रावृत्तिका लागि आवेदन दिनेको संख्या १९ हजार पुगेको छ । गत बुधबारदेखि सुरु मेलामा ‘शिलापत्र उज्ज्वल स्कलरसिप’का लागि १९ हजार बढी आवेदन परेकाे हाे
‘भर्चुअल मेलामा विद्यार्थीको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ’, कार्यक्रमका संयोजक डा. संविधान आचार्यले भने, ‘स्कलरसिपका लागि आइतबारसम्म १९ हजारले आवेदन दिएका छन् ।’
छात्रावृत्तिको लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीको परीक्षा पनि सुरु गरिएको संयोजक आचार्यले बताए । ‘इन्ट्रान्स परीक्षा पनि सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘एक चरणको परीक्षा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजमा लिएका छौँ । फेयरमा २३ वटा कलेज छन् । विद्यार्थीले जुन कलेजमा भन्छन्, त्यही कलेजमा परीक्षा हुन्छ ।’
९ जनाको लागि पूर्ण छात्रावृत्ति र २ सय जनलाई डेढ लाख बराबरको छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्ण छात्रावृत्ति पाइने कोर्स र कलेज
बीबीए– कलेज अफ एप्लाईड बिजनेस
बीएचम– टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज
बीआइटी– टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज
बीएचम– राजधानी मोडेल कलेज
बीएसडब्लू– काठमाडौं मोडेल कलेज
बीसीए– काठमाडौं मोडेल कलेज
बीसीआईएस– मेधावी कलेज
बीटीटीएम– ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनल
१ लाख भिजिटर
१ लाख विद्यार्थीले नेपाल एडुफेयर डटकम भिजिट गरेर शैक्षिक परामर्श लिएका छन् । ‘परामर्श लिने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ’, संयोजक आचार्यले भने, ‘अहिलेसम्म १ लाख विद्यार्थीले भिजिट गरेका छन् ।’
स्नातक पढ्ने तयारी गरेका विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले भर्चुअल शैक्षिक मेलाको आयोजना गरेको हो ।
मेलामा कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? पढेपछि के बन्ने ? के–कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के–कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहजीकरण गरिने छ । मेला २० माघसम्म चल्नेछ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, माघ ११, २०७७, १५:०९:००